Mahaa21 – My WordPress Blog
Myanmar American Humanitarian Aid Association (MAHAA)
This isaNon Profit Organization established by American Myanmar community in New York in response to arising humanitarian aid needs for internally and externally displaced people due to Military Coup in Myanmar on 1 February 2021.
It was started in March 2021 and successfully registered as Non Profit Organization in Queens, New York in June 2021.
MAHAA has been doing fundraising events since its establishment and donated all funds raised to families affected by Civilian Disobedience Movement (CDM) and social unrest by armed forces.
Please come and join us in upcoming fundraising events. You all are welcome.
MAHAA နှင့် NYCBC တို့၏ တတိယခြေလှမ်း ရံပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲကို အောင်တို့ဘာ (၃၀) ရက်နေ့က ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်များကို လှူတန်းနိုင်ရန် အတွက် ရန်ပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲတိုင်းတွင် ပါဝင်ရောင်းချ လှူတန်းပေးကြသော အလှူရှင် တယောက်စီတိုင်းကို အထူး ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
ရံပုံငွေ ဈေးရောင်းပွဲမှ ရရှိသော အလှူငွေစုစုပေါင်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ $၂၀၅၇၆.၅၇ (အသုံးစရိတ်များ နှုတ်ထားပီး) အလှူငွေထဲမှ $၁၀၃၀၀/- အား NYCBC အဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ မဟာ အဖွဲ့မှ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ လိုအပ်နေသော နေရာများသို့ ပို့ဆောင်လှူဒါန်းမည် ဖြစ်ကြောင်း အလှူရှင် အပေါင်းကို အသိပေးပါသည်။
အလှူဒါနအတွက် သာဓု ခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ
Dear Friends of MAHAA
We would like to share our Season’s Greetings with you. All of us from MAHAA wish youasafe and prosperous year for ②⓪②②. We pray for peace and happiness for all, especially for everyone in our homeland.
Moreover, we would like to thank you for supporting our efforts to help and assist our people in Myanmar who are suffering from hardship and injustice. While we wait for stability andapeaceful return to our homeland, we will continue to provide critical assistance as needed.
MAHAA team and grateful recipients in Myanmar are deeply touched by your kind and generous contributions you have made. We assure you that we take utmost care to distribute your donation through proper channels. You may still make donations through the MAHAA website, Facebook page, and email – especially during this harsh wintertime in Myanmar.
Again, haveasafe and joyous holiday season. Happy New Year to everyone
မိတ်ဆွေများအားလုံးတွက် နှစ်သစ်ကူးကာလ ဆောင်းရာသီတွင် ဘေးရန်ကင်းရှင်းပြီး ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်၊ အေးချမ်းပျော်ရွှင်စရာကောင်းသော နှစ်သစ်ကူး ကာလနှင့် ခရစ်စမတ်ပွဲတော်ကို မင်္ဂလာပြည့်ဝစွာဆင်နွှဲပြီး အောင်မြင်ကြွယ်ဝသော နှစ်သစ် ၂၀၂၂ ဖြစ်ပါစေရန် တောင်းဆုချွေ မျှဝေအပ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်ရှိ
နိုင်ငံသားမိသားစုများ ဘေးရန်ကင်းစွာ ကျန်းမာချမ်းသာ အေးချမ်းမှုရရှိသော နှစ်သစ်ကာလဖြစ်ပါစေရန် ဆုတောင်း မျှဝေအပ်ပါသည်။
ယခု ဆုတောင်းနှင့်အတူ မြန်မာပြည်သူအများအတွက် ချို့ယွင်းလာသော နိုင်ငံရေးကြောင့် လုံခြုံရေး, စီးပွါးရေး, စားဝတ်နေရေး, ကျန်းမာရေး စသည်များ အရေးပေါ်လိုအပ်ချိန်တွင် သနားစာနာ စိတ်စေတနာ အပြည့်ဖြင့် ကိုယ်ကျိုးမဖက် ပြည်သူတွေအတွက် လှူဒါန်းသူများ လုပ်အားပေးသူများအားလုံးကိုလည်း အထူးလေးစားစွာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း နှစ်ကူး ဆုတောင်းနှင့်အတူ ထပ်မံဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည်။
ရံပုံငွေအစီအစဉ်များ, လှူဒါန်းငွေများအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှတဆင့် ပေးကမ်း လှူဒါန်းပြီးပါပြီ၊ လက်ခံရရှိကြောင်း ကျေးဇူးတင်ပြန်စာများလည်းရှိပါသည်၊ နှစ်ချုပ်စာရင်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပေးပါမည်။
အသင်းအနေဖြင့် မြန်မာပြည်သူများကို ကူညီမှုများဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ လှူဒါန်းလိုသူများ Website သို့မဟုတ် Facbook/Meta မှတဆင့် Zelle သို့မဟုတ် email ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဆက်လက်ကူညီနိုင်ပါသည်။
ဘေးရန်ကင်းရှင်းကြ၍ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမာချမ်းသာကြပြီးလျင်
ပျော်မွေ့စရာကောင်းသော ၂၀၂၂ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေရန် ထပ်မံဆုတောင်းပို့သ
𝐒𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐚𝐭𝐞: 𝐌𝐀𝐇𝐀𝐀’𝐬 𝐅𝐨𝐮𝐫𝐭𝐡 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐫𝐚𝐢𝐬𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭 𝕠𝕟 𝟚𝟞 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕙 𝟚𝟘𝟚𝟚 (𝟙𝟙 𝔸𝕄 𝕥𝕠 𝟛:𝟛𝟘 ℙ𝕄 𝔼𝔻𝕋)
Dear Friends of MAHAA,
To welcome spring andahighly anticipated Federal Government in Myanmar (led by NUG), MAHAA will organize our 1st. fundraising event for 2022 consisting ofaraffle program, delicious Myanmar/ ethnic cuisines, and souvenirs. We warmly invite everyone including all the souvenir and food donors/ vendors (whether traditional Burmese or ethnic cuisines) to collaborate and raise funds. Those who would like to donate valuable items can participate via the auction program.
We welcome everyone, regardless of race and religion, to support the people of Myanmar by participating in our fourth fundraising event.
Date: 26 March 2022, 11 AM to 3:30 PM EDT
Venue: St. James Episcopal Church 84-07 Broadway, Elmhurst, NY. 11373
Public Transportation: Subway – D, M, F, R/ Bus – Q58, Q60
Ma WarWar SeintSeint MyoNyunt (347)935-2605
Daw Mar Swum (347)493-0036
Daw NuNu Yee/ U Kyaw Win (646)712-0982
Ma Shin Min (347)697-9751
Ko Nay Tin Myint (347)944-7341
U Soe Myint (718)314-7888
Daw Aye (646)240-7568
ဆောင်းအကုန် နွေဉီးအကြိုနှင့် အထူးလေးစားမျှော်လင့် စောင့်စားနေရသော မြန်မာဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု အစိုးရဖွဲ့စည်းမှုကို ဂုဏ်ပြကြိုဆိုသောအားဖြင့် မြန်မာအမေရိကန် လူမှုရေးကူညီထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ MAHAA မှ ၂၀၂၂တွက် ပဌမ ရံပုံငွေရှာ စျေးရောင်းပွဲ စုစည်းကျင်းပရန် စီစဉ်နေပါသည်။ ရိုးရာ မြန်မာအစာများနှင့်အတူ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ရိုးရာအစာများ၊ တိုင်းရင်းသား အမှတ်တရလက်ဆောင်များ၊ ရံပုံငွေကံစမ်းမဲ နှင့် ဆုလက်ဆောင်များ ပါဝင်ပါသည်။ အဘိုးတန် ရိုးရာအမှတ်တရ လက်ရာများ လှူဒါန်းလိုပါက ကျေးဇူးတင်စွာ လေလံစံနစ်ဖြင့် မြှင့်တင်ဂုဏ်ပြုပေးပါမည်။
မွေးရပ်မြေရှိ ပြည်သူတို့အတွက် စေတနာထက်သန်စွာ ပူးပေါင်းကူညီလိုသူ၊ ရောင်းချလှူဒါန်းလိုသူ မြန်မာနွယ်ဖွား စေတနာရှင် မိသားစုများအား လူမျိုးဘာသာမရွေး လေးစားစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
ရံပုံငွေစျေးနေ့ရက်: မတ်လ ၂၆ စနေနေ့ နံနက် ၁၁ နာရီမှ မွန်းလွဲ ၃:၃ဝ
နေရာ: စိန့်ဂျိမ်းစ် ဘုရားကျောင်း (St. James Episvopal Church)
၈၄-၀၇ ဘရော့ ဒ် ဝေး ။ အဲ လ် မ်ဟ တ် စ်
ရထား – D, M, F, R/ ကား – Q58, Q60
ဒေါ်နုနုရီ/ ဉီးကျော်ဝင်း (646)712-0982
လူမျိုးဘာသာမရွေး မြန်မာပြည်ဖွား မိသားစုများနှင့် မိတ်ဆွေများ၏ မိတ်ဆွေအားလုံး ပူးပေါင်းဆင်နွဲကြပါရန် လှိုက်လှဲစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
Mahaa21, Proudly powered by Bearsthemes.